Blog Propars: Ny zava-drehetra momba ny E-varotra! | Propars E-Export
Blog Propars: Ny zava-drehetra momba ny E-varotra!
Inona no atao hoe Amazon Enhanced Producer Responsibility (EPR)?
Amazon, sehatra e-varotra lehibe indrindra eran-tany, dia nanambara teo aloha fa amin'ny 2022, ny mpivarotra dia hanatsara ny andraikiny momba ny Enhanced Producer Responsibility (EPR). Indrindra fa ny manodidina an’i Alemaina sy Frantsa...
15 Martsa 2022
Amin'ny maha ekipa Propars anay dia nanangona ho anao ny zava-nitranga tao amin'ny tsenan'ny e-varotra eoropeana tamin'ny 2021, izay navelanay vao haingana.
28 Janoary 2022
Ahoana ny fomba fivarotana any ivelany?
Miaraka amin'ny tontolon'ny nomerika sy ny fampiasan'ny Internet miely patrana, dia afaka mivarotra any ivelany ny orinasa rehetra. Fitrandrahana mpanjifa bebe kokoa, fanombanana ny vokatra azony amin'ny teny TL miaraka amin'ny varotra vola vahiny, ary fanokafana tsena vaovao...
Inona no atao hoe Omnichannel sy Multichannel Marketing? Iza no mahomby kokoa amin'ny toeram-piasanao?
Na dia adika amin'ny teny Tiorka aza ny marketing Omnichannel sy Multichannel ho marketing amin'ny fantsona maro, dia samy hafa ny teny. Ny fahatakarana ny fahasamihafana misy eo amin'ireo hevitra roa ireo sy ny fampifanarahana azy ireo amin'ny toeram-piasanao amin'ny fomba mety indrindra dia ho an'ny orinasanao...
Mahazoa fahombiazana amin'ny varotrao firavaka volafotsy, volamena ary diamondra amin'ny e-varotra!
Rehefa avy namaky ity lahatsoratra nomaninay ho anao ity ianao dia hanana ny fampahalalana ilaina rehetra hamoronana ny fivarotana firavaka an-tserasera, hitantana sy hivarotra ny firavakao volafotsy, volamena ary diamondra. Nahoana no ao anatin'ny sokajy firavaka...
24 Septambra 2021
Fitsipika VAT (VAT) Vaovaon'ny Vondrona Eoropeana / Inona no atao hoe IOSS SY OSS?
Tamin'ny faran'ny taona 2020, nanapa-kevitra ny Vaomiera Eoropeana fa hanemotra ny lalàna vaovao momba ny VAT (VAT), izay antenaina hanan-kery ny 1 Janoary ho 19 Jolay 1 noho ny valan'aretina Covid-2021. Firenena misy Corona...
Ahoana ny fomba fivarotana amin'ny sehatra Wish?
Ny lohahevitra resahinay ao amin'ny lahatsoratry ny bilaogy, izay ilazanay aminao izay tokony ho fantatrao mba hivarotana amin'ny sehatra Wish, iray amin'ireo tsenan'ny e-varotra miampita sisintany lehibe indrindra eran-tany avy any Etazonia ka hatrany Eoropa; Inona no atao hoe Wish? maniry...
Amazon Prime Day: Toro-hevitra momba ny mpivarotra
Andro vitsy sisa tavela amin'ny hetsika Amazon Prime Day, izay atao isan-taona maneran-tany ary mitohy mandritra ny roa andro. Amin’ny fampielezan-kevitra hatao ny 21-22 jona amin’ity taona ity, ny Praiminisitra...
Ahoana ny fomba fanondranana elektronika any Mexico?
Ny lohahevitra noresahinay tao amin'ny lahatsoratra bilaogy, izay nomaninay ho tondrozotra ho an'ireo izay te hanondrana any Mexico, izay manaraka ny fahombiazan'i Amerika sy Kanada amin'ny e-varotra; Meksika E-varotra Volume no be indrindra any Meksika...
Ebay dia nanaiky ny Payoneer ho fomba fandoavam-bola!
Vaovao mahafaly ho an'ny mpivarotra! Nanjavona tao amin'ny Ebay ny olana PayPal, iray amin'ireo sehatra lehibe indrindra eran-tany. Vokatry ny fampidirana Payoneer amin'ny safidiny fandoavana, ny eBay dia nampiditra Payoneer amin'ny kaontinao mpivarotra ho anao.
Ny zavatra rehetra ilainao momba ny E-Commerce!
Famakafakana sokajy 1
Famakafakana ny firenena 3
Copyright © Blog Propars: Ny zava-drehetra momba ny E-varotra!. 2022 • Zo rehetra voatokana.
Koala WordPress Theme by EckoThemes. Navoaka miaraka WordPress.